I-Hopin: Indawo eyiyo yokuDibana nokuzibandakanya kwiZinto zakho ze-Intanethi | Martech Zone
I-Hopin: Indawo eyiyo yokuDibana nokuzibandakanya kwiZinto zakho ze-Intanethi
Ngelixa ukutshixwa kwezinto kwaqhuba iminyhadala ebonakalayo, ikwakhawulezisa ukwamkelwa kweziganeko ezikwi-Intanethi. Oku kubalulekile ukuba iinkampani zikuqonde. Ngelixa imicimbi yomntu ngaphakathi inokuthi ibuye njengendawo yokuthengisa ebalulekileyo kunye nejelo lokuthengisa kwiinkampani, kunokwenzeka ukuba iminyhadala ebonakalayo iya kuqhubeka nokwamkeleka kwaye ibe lijelo eliphambili ngokunjalo.
Ngelixa amaqonga eentlanganiso aqhelekileyo anikezela ngesixhobo esinokuphunyezwa ukuba sibe nentlanganiso enye okanye ii-webinars, ezo zixhobo ziyasilela ekunikezeleni ngeqonga lilonke elibandakanya zonke iimpawu ze ingqungquthela. Umhlobo wam olungileyo UJack Klemeyer Ukwabelane ngesixhobo esisetyenziswa yinkampani yakhe yokuqeqesha ukuswitsha kwinkomfa yonyaka yabantu ukuya kweyenyani… IHopin.
IHopin: Indawo ekuyo yonke imicimbi yakho
Hopin yindawo ebonakalayo eneendawo ezininzi ezisebenzisanayo ezilungiselelwe ukudibanisa kunye nokuzibandakanya. Abantu abazimeleyo banokungena baphume namagumbi nje ngomnyhadala wobuntu kwaye bonwabele umxholo kunye nonxibelelwano obenzele lona.
I-Hopin yenzelwe ukuphindaphinda amava omntu ongaphandle komntu, ngaphandle kwezithintelo zokuhamba, iindawo, imozulu, ukungazulazeki okungathandekiyo, ukupaka, njalo njalo. NgeHopin, amashishini, uluntu, kunye nemibutho banokufikelela kubaphulaphuli behlabathi, bahlanganisane endaweni enye, kwaye benze umsitho omkhulu kwi-Intanethi uzive umncinci kwakhona.
Iimpawu zeHopin zibandakanya
Ishedyuli yomsitho Kwenzeka ntoni, nini, kwaye leliphi icandelo eliza kulandela.
Ukufumana - iphepha lokwamkela okanye Indawo yokuhlala yomsitho wakho. Apha unokufumana ngokukhawuleza okwenzekayo kumsitho okwangoku.
Isigaba Ukuya kuthi ga kwi-100,000 yabantu abazimeleyo abanokuzimasa iinkcazo-ntetho okanye amanqaku aphambili. Sasaza bukhoma, dlala umxholo orekhodwe kwangaphambili, okanye usasaze nge-RTMP.
Session Ukuya kuthi ga kwi-20 abazimeleyo banokuba kwiscreen esinye kunye nabamakhulu ababekhona ababukele kwaye bencokola kwiiseshini ezingenamda ezinokuqhuba ngaxeshanye. Ukufezekisa ngokujikeleza, iiprojekthi, okanye iingxoxo zeqela
Uluhlu lwezithethi -Khuthaza ngubani othetha kulo msitho.
iNethiwekhi -Izinto ezizenzekelayo zokubamba iintlanganiso zomntu nomnye ukwenzela ukuba abantu ababini abe khona, izithethi, okanye abathengisi babe nefowuni yevidiyo.
ncokola -Ingxoxo yomsitho, ingxoxo yeqonga, izingxoxo zeseshoni, izingxoxo zebhokisi, izingxoxo zentlanganiso, izingxoxo zasemva kwesiteji, kunye nemiyalezo ethe ngqo zonke zidityanisiwe. Imiyalezo evela kubaququzeleli inokuxhonywa kwaye ibalaselisiwe ukuze kuchongwe ngokulula ababekho.
Iindawo zemiboniso -Dibanisa abaxhasi kunye neendawo zokuhlala abathengisi apho umsitho-abahamba khona banakho Hamba ekujikelezeni Ukutyelela iminquba abanomdla kuyo, ukunxibelelana nabathengisi, kunye nokuthatha inyathelo. Idokodo ngalinye kumnyhadala wakho linokuqulatha ividiyo ebukhoma, umxholo onophawu, amakhonkco e-Twitter, iividiyo ezirekhodwe kwangaphambili, izibonelelo ezizodwa, abathengisi kwikhamera ebukhoma, kunye nee-CTA zeqhosha elicwangcisiweyo.
Iimpawu zomxhasi Iimpawu ezinokucofa ezizisa iindwendwe kwiiwebhusayithi zabaxhasi bakho.
Ukuthengisa itikiti Ukudityaniswa kwamatikiti kunye nokulungiswa kwentlawulo kunye neakhawunti yomrhwebi weStripe.
Iifutshane ze-URL -Nika ababekho ucofa kanye ukungena kulo naliphi na icandelo lomsitho eHopin.
I-Hopin liqonga lonke lomnyhadala elungiselelwe ukudibanisa izithethi zakho, abaxhasi, kunye nababekho. Abaququzeleli banokufezekisa iinjongo ezifanayo zeziganeko zabo ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngokwenza ngokwezifiso iminyhadala yabo yeHopin ukuze ihambelane neemfuno, nokuba ingumcimbi wokuqesha abantu abangama-50, intlanganiso yezandla zabantu abangama-500, okanye ingqungquthela yonyaka yabantu abangama-50,000 XNUMX.
Fumana iDemo yeHopin
tags: incoko yomsithoIndawo yokubonisahopiniinkomfa kwi-IntanethiIziganeko ezikwi-intanethiuluhlu lwezithethingombalaukuthengiswa kwetikitiIifowuni zevidiyoumboniso obonakalayo
CSV Explorer: Sebenza ngeefayile ezinkulu ze-CSV